. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ကျမနှင့် အလုပ် (၃)
ဒီလ ၁ရက်နေ့မှာပဲ စလုံးမှာ သောင်တင်ခဲ့တာ ၃နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ .. ပျော်လား ဆို မပျော်ဘူးရယ်လဲ မဟုတ်ပါဘူး .. စိတ်ညစ်လား ဆို ညစ်လှတယ်လဲ မဟုတ်ပါဘူး .. :D ဒီလိုပဲ မိုးခါးက ကြားနေ၀ါဒလေ .. :P
ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်အလုပ် အဆင်သိပ်မပြေဘူးဆိုပြီး အစ်မတွေ ရှိတဲ့ စလုံးကို လိုက်မယ်ပြင်ပါတယ် .. လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ် ကျော်ကျော်ကပေါ့ .. အလုပ် မရှိတော့ဘူး ဆိုတာနဲ့ အိမ်မှာပဲ သောင်တင်နေပြန်ပါတယ် .. စာအုပ်ငှားလိုက် ဖတ်လိုက် .. ခွေငှားလိုက် ကြည့်လိုက် .. သူငယ်ချင်းတွေ လာလိုက် မလာရင် ကိုယ်က သွားလိုက် .. အဲဒီလို အလေလိုက်လို့ရမယ့် အချိန်မျိုး ခဏလောက်တော့ ပြန်လိုချင်တယ် .. အမြဲတော့ မနေချင်ပါဘူး .. ၁ပတ်တန်သည် ၁လတန်သည်ပေါ့ .. :D
လချီပြီးနေလာရင်း အစ်မရဲ့ အမျိုးသားရဲ့ အသိက မြို့နယ်အခွန်ရုံးက အခွန်မှူးပါ .. သူတို့ရုံးမှာ စာရင်းလုပ်ဖို့ စာရိုက်ဖို့အတွက် လူလိုတယ်ဆိုလို့ မိုးခါးတို့ စပ်စပ်စပ်စပ် သွားလိုက်ပါသေးတယ် .. အနည်းဆုံး ကိုယ့်မှာ ၀င်ငွေ (ဘယ်လောက်ရရ) ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုး ကြိုက်ပါတယ် .. အလကား အားနေရမယ် ၀င်ငွေ မရှိရင်လည်း မနေနိုင်တော့ပါဘူး ..
အဲဒီ ဦး--- က သဘောကောင်းပါတယ် .. စိတ်ကောင်းလည်း ရှိတယ် .. ကိုယ့်အပေါ်လဲ ကောင်းပါတယ် .. ပြောရရင် မတော်လိုက်ရတဲ့ ခဲအိုပေါ့ .. :D အမွှာ အစ်မထဲက အကြီးက မင်္ဂလာဆောင်တော့ အမွှာအငယ် အစ်မနဲ့ အဲဒီ ဦးနဲ့က အရံ လုပ်ပါတယ် .. (ကြုံတုန်း ဖောက်သယ်ချတာပါ .. :D) ပြီးတော့ အဲဒီဦးက ပိုးချင်ပါတယ် မိုးခါး အစ်မကို .. ဒါပေမယ့် အစ်မ ဆိုးချက်က လာပိုးနေရင်း ကတုံး တုံးလိုက်ပါရောလား (သီလရှင် ၀တ်တာပါ) .. အဲဒီတော့ နောက်ပိုင်းလည်း မလာဖြစ်တော့ပဲ မိုးခါးရဲ့ ခဲအိုအဖြစ်က လွဲသွားပါတော့တယ် .. ခုတော့လဲ အိမ်ထောင်ကျပြီပေါ့ .. မိုးခါးတို့ ကပ်စားရမယ့် အကိုတယောက် လျော့သွားပါတယ် .. :D
ဒီလိုနဲ့ စလုံးလာလို့ရပြီ စာရွက်စာတမ်း စုံပြီဆိုတဲ့အဆင့်မှာ မိုးခါးလည်း အဲဒီ အလုပ်က နားပြီး စလုံးလာဖို့ ၀ယ်ခြမ်း ပြင်ဆင်ပါတော့တယ် ..
အစကတော့ ထင်မိပါတယ် .. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြင်ပဖြစ်တဲ့ သူများနိုင်ငံတွေက အတော် ခမ်းနား ထည်ဝါလေမလားလို့ပေါ့ .. လူတွေကလည်း ညွှန်းတယ်လေ .. လေဆိပ်ကြီးက ဘယ်လိုကြီးတာ .. သန့်တာ .. တိုက်တာတွေက ဘယ်လို .. ဘယ်နေရာသွားသွား အဲကွန်းနဲ့ .. အေးလွန်းလို့ လိုးရှင်းတွေ အချိန်ပြည့် လိမ်းရတာ .. စသည်ဖြင့်ပေါ့ .. ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ မှာတော့ အဲလောက်မဟုတ်ဘူးလားလို့လေ ..
ပထမဦးဆုံး အင်တာဗျူးကို ၂ပတ်ကျော်လောက်မှာ စရပါတယ် .. အဲဒါလည်း work in interview ကို အစ်မက ဖုန်းဆက်ပေးခဲ့တာပါ .. နေရာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ သွားရှာရတာပေါ့လေ .. အစ်မတွေကလည်း အလုပ်တဖက်ဆိုတော့ ..
အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ မိုးတွေ အရမ်း အရမ်းကို ရွာပါတယ် .. ရတဲ့ အင်တာဗျူးက ၂ခုပါ .. ၂ခုလုံး Eunos နားမှာပါ .. ၂ခုလုံးလည်း Interior Design ကုမ္ပဏီချည်းပါပဲ ..
ပထမသွားရမယ့် ကုမ္ပဏီက MRT ကနေ တော်တော်လေး လှမ်းပါတယ် .. ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ဖြစ်သလို နေရာကလည်း ရှာရတာ တော်တော်ကို လည်ထွက်နေပါတယ် .. တကိုယ်လုံးလဲ ရွှဲပေါ့ .. ဒီလိုနဲ့ ဟိုမေး ဒီမြန်း ဟိုလျှောက်သွား ဒီလျှောက်သွား နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ လိုရာကို ရောက်ခဲ့ပါတယ် .. သူဌေးက ငယ်ပြီး ခုမှာ ကုမ္ပဏီ စဖွင့်ကာစပါ .. စုစုပေါင်းမှ လူက ၃ယောက် .. :D သူဌေးကပဲ ၂ယောက် .. နောက်တယောက်က ကျောင်းသူလေး ပတ်တိုင်းပဲ လုပ်မှာပါ ..
အင်တာဗျူးတော့ 2D ရလား 3D ရလားပေါ့ .. ဒီကလည်း 2D ရတယ် 3D မရပါ ပေါ့ .. နောက်တော့ ဆွဲပြနိုင်လားမေးပါတယ် .. ဒီကလည်း ရတယ်ပေါ့ .. ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ Autocad software မရှိပါဘူး .. ဒီတော့ လောလောဆယ် လက်နဲ့ ဆွဲနိုင်လား မေးပါတယ် .. ဒီကလည်း ရတယ်ပဲ ပေါ့ .. :D ဒီတော့ သူတို့ အိမ်ခန်း ဒီဇိုင်းပုံစာအုပ် ထုတ်လာပါတယ် .. ပြီးတော့ A4 စာရွက်ပေးပြီး ဆွဲခိုင်းပါတယ် .. သူတို့ လိုချင်တာက အခန်းတခန်းကို ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ ဖွဲ့မလဲပေါ့ .. ကြည့်ဆွဲဖို့ စာအုပ်ပေးပြီး ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ ပေါင်းဆွဲခိုင်းတာပါ .. ကိုယ်ကလည်း ဒါလောက်တော့ အပျော့ပေါ့ .. ထိုင်ဆွဲလိုက်တာ ၂ပုံလား ၃ပုံလားပဲ .. စာအုပ်ထဲကဟာကို ဖော်လို လုပ် တခြား ငါးကန်တွေ ပန်းအိုးတွေ တီဗွီတွေ လျှောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်လေ .. သူတို့ အတည့်ဆွဲတာကို ကိုယ်က ပြောင်းပြန် ဆွဲပေးလိုက်တယ် .. :P မိုးရေက ရွှဲရွှဲ အဲကွန်းက အေးအေးနဲ့ လူလည်း ခဲတော့ပါမယ် ..
နောက်ဆုံးတော့ ၂နာရီလောက်အကြာမှာ မိုးခါးပုံတွေလည်း ပြီးပါပြီ .. သူတို့ကို ပြတော့ သူတို့ဟာသူတို့ တရုတ်လို မဆိုးဘူး ဘာညာပြောပါတယ် .. နောက်တော့ နောက်နေ့ပြန်လာဖို့ လုပ်ထားတဲ့ ပရောဂျက်တွေ ယူလာခဲ့ဖို့ စသည်ဖြင့် မှာပြီး ပြန်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ် ..
ပြန်လို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ နောက်အင်တာဗျူးအတွက် အချိန်က မမှီတော့ပါဘူး ၃နာရီလောက် နောက်ကျနေခဲ့ပါပြီ .. ဒီလိုနဲ့ ပထမနေ့ အင်တာဗျူး အစီအစဉ် ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ် ..
နောက်ရက် အတွေ့အကြုံကို နောက်နေ့ ထပ်ဆက်ပါမယ်နော် .. ခုတော့ တော်တော်လည်း ရှည်နေတော့ ဖတ်ရတာလည်း ပျင်းနေလောက်ပြီထင်ပါတယ် ..း))
ရေးသားသူ မိုးခါး at 3/10/2011 12:06:00 AM
အကြောင်းအရာခွဲ ကျမနှင့်, အတွေ့အကြုံ